Chelsea Oo Dib Ula Saxiixaneysa Hazard, Salah Oo Baxaya , Mourinho Oo La Ceyrinayo & Wararkii Ugu Dambeeyay – Garsoore Sports
Chelsea Oo Dib…
Daaqada Suuqa kala iibsiga cayaartooyda ma furna xilligan, kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa suuqii bishii Janaayo, balse kuma xirna kooxuhu inay sugaan suuqa xagaaga si ay saxiixyo u sameeyaan balse waxay lasii xiriirayaan bartilmaameedyadooda xagaaga iyadoo qaarkood heshiisyo lasii gaaraya cayaartooyda si ay durbaba ula saxiixdaan xagaaga. haddaba waxaan innaguna idiin soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa.
Manchester City ayaa rumeysan in ku guulleysiga horyaalka Premier Leaguega xilli cayaareedkan ay hubin doonto in Chelsea ay ku garaacdo saxiixa weeraryahanka Borussia Dormund ee reer Norway Erling Braut Haaland (Star)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in cayaaryahanka khadka dhexe ee reer France Paul Pogba uu qarka u saaran yahay inuu heshiis cusub u saxiixo Old Trafford. (Guardian)
Weeraryahanka reer Masar Mohamed Salah ayaa noqon kara cayaaryahanka booska ka bixi kara haddii Liverpool ay dooneyso inay lasoo saxiixato weeraryahanka Paris St-Germain iyo xulka France Kylian Mbappe xagaaga. (Marca)
Reds ayaa dhammeystirtay saxiixa 16 jirka qadka dhexe ee reer England Kaide Gordon oo aad looga qiimeeyo kooxda Derby County. (Mail)
Chelsea ayaa isku dayi doonta inay ku garaacdo Real Madrid saxiixa daafaca Bayern Munich iyo reer Austria David Alaba, kaasoo qarka u saaran inuu ka tago kooxda heysata horyaalka Jarmalka iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli cayaareedkan. (Guardian)
Dhanka kale, Chelsea ayaa dooneysa saxiixa labo bartilmaameed oo kale oo daafac ah – xiddiga reer France ee RB Leipzig Dayot Upamecano iyo xiddiga Bayern Munich ee Jarmalka Niklas Sule (Goal)
Sidoo kale Blues ayaa u dhaqaaqi karta daafaca Bayern Munich Jerome Boateng. (Bild)
West Ham ayaan ku deg degi doonin inay go’aan ka gaarto haddii ay isku dayayaan inay amaah ku helaan 28 jirka khadka dhexe ee reer England Jesse Lingard oo ka tagaya Manchester United. (Standard)
Leicester City ayaa wadahadalo kula jirta cayaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans iyagoo usoo bandhigay heshiis cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo £ 100,000. (Mail)
Chelsea ayaa xiiseyneysa inay dib ula soo saxiixato weeraryahankoodii hore ee reer Belgium Eden Hazard.(Defensa Central – Isbaanish)
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid amaahna kula jooga Arsenal ee Martin Odegaard ayay u badan tahay inuu si joogto ah ugu dhaqaaqo Arsenal haddii Zinedine Zidane uu sii ahaado macalinka kooxda Real Madrid. (Eurosport)
Cayaaryahankii hore ee Arsenal Marc Overmars ayaa xiiseynaya inuu ku laabto kooxdiisii hore isagoo ah agaasimaha kubbada cagta. Haatan wuxuu booskaasi hayaa kooxda Ajax. (De Telegraaf, Dutch)
Manchester United ayaan mar dambe u baahnayn inay lasoo saxiixato daafac dhexe oo cusub sababtuna waxay tahay qaab cayaareedka cajiibka ah ee daafaca reer England Harry Maguire. (Manchester Evening News)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isha ku haya inuu lasoo saxiixdo 21 jirka daafaca middig ee reer England Max Aarons oo ka tirsan Norwich City marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga. (Express)
Dhanka kale, Solskjaer ayaa laga yaabaa inuu tartan kala kulmo kooxda Tottenham, iyadoo Spurs ay isha ku heyso daafacan rajana ka qabto inuu xagaaga beddel u noqon doono daafaca middig ee Ivory Coast Serge Aurier. (Eurosport)
Tababare Jose Mourinho ayaa cadaadis kala kulmaya kooxda Tottenham laakiin kuma jiro halista ugu dhow ee ah in la ceyriyo. (Telegraph)
Yaab: Kooxda Ajax Oo Liiskeeda CL-ga Ka Saartay Saxiixooda Rikoorka